Blog — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
"Uhambo ebhaliweyo incwadi endicinga ukuba wonke umntu oselula kufuneka ukufunda. Ifuthe lakhe uYesu yaye esi sizukulwana iza elikhulu nolucacileyo ngokuba zonke phepha. Andikwazi abalindeli ukubona ifuthe walo myalezo kwi isizukulwana leyo olambileyo injongo "-. Lecrae, Grammy nokunikwa- ngokuphumelela igcisa @lecrae "Vuka yincwadi iye eligcina intliziyo inkcubeko yethu. Kwathi kamsinya nje ndakuba wayichola ndandingakwazi ukuyibeka phantsi. Uhambo umngeni ukuba WOKWENENE, kwaye ibonisa indlela ukuphila ubomi bakho omdala ehlabathini namhlanje. Funda Enkulu "-. Sam mna, NFL linebacker, wobuntu @thesamacho "Uhambo ubhale incwadi ndinqwenela ukuba ndifunde xa ndandiselula. Ifuthe lakhe, ubulumko, nomnqweno umngeni isizukulwana abasebatsha womyoleli ukuba umsebenzi ngokwenza ngokusebenzisa Uhambo kunye nomsebenzi uya kukwenza sonke kaThixo. "- Kirk Franklin, Grammy ibhaso- ngokuphumelela kunye multi-platinum sokurekhoda igcisa @kirkfranklin "Ndandikuthanda ukufunda Vuka. amaxesha amaninzi kule ncwadi ndazibona Medi- bachi- phezu amaphepha emva ndandifunda nabo. Ndakhuthazwa, aphefumlelweyo, kwaye umngeni kwindlela eya. Isithethe ulindele ukuba achithe ixesha kodwa uThixo ...
incwadi entsha Uhambo ngayo, phakama, uphuma ngoku! Funda intshayelelo John Piper ukuba le ncwadi ngezantsi. Uyakwazi phambi-odola ncwadi ufumanise ngakumbi apha Risebook.tv Enye yezinto eziphambili ndiyayithanda malunga Trip Lee kunye nencwadi yakhe, phakama, ke eziqhubekekayo nentlonelo nokufaneleka. Injongo apha ukufaneleka kwinkcubeko American eqhelekileyo. Cool na Abazobi. Njengoko Mack Stiles uthi, Inkoliso amaKristu ehlabathini umoyike ngenqindi wamvusa; BaseMerika ukumoyika amashiya wamvusa. Nto ithetha ukuthi asingabo cool. ezingenasihlahla. Kodwa ezinenjongo nentlonelo kunqabile. Sinokuhlonela uziva endala. Kuvakala yangatsali. Andifuni aphozise. Kodwa wonke umntu uyazi, nzulu ezantsi, ukuba xa sinokuhlonela uya, bonke ubomi bomntu buba ezahlukeneyo zibonisa. Thin. nohayi ombaxa. Umjelo. iplastiki. ongenanto. Ekugqibeleni, nantsingiselo. Siya kwenziwa ngaphezulu. "Cool thenjwa, nathi siphila kuba "-i amazwi Trip Lee. kanye. Ukuzama ukuphila nje ukuba kuhle, nje ukuba ufanelekile, iphantsi. Ke ilizwi Trip Lee ukuba udanduluka, phakama! Ininzi kakhulu ukubona, ukwazi, ukuthanda, ukonwabela. Kukho zokwenene kakhulu kangangokuba ayinako inokwehliswa fun. Amazwi "intlekisa" "ngokufutha" "ibhola" "iqela" isandi leyo ...
Yintoni Book Rise Malunga?
Abantu baye babuza Uhambo ukuba incwadi yakhe intsha imalunga. Apha uthetha ukuba ngokufutshane. Ungafunda okuninzi malunga incwadi Risebook.tv
Vuka Iqela Street
Molweni bahlobo! My incwadi Vuka u khulula ngoJanuwari 27 (kwiveki elandelayo!) kwaye ndidinga uncedo lwakho. Siza ukhangela abantu abanokusinceda abe yinxalenye yeqela Street uze usincede ukwandisa igama malunga ncwadi ngekhompyutha kwaye kwimidiya yabo kwezentlalo. Uyakwazi ukuqwalasela ngakumbi incwadi http://RiseBook.tv umthandazo wam ukuba uThixo uza kuthabatha le ncwadi kwaye usebenzise umyalezo yayo umngeni kwisizukulwana sethu ukuba phezulu kwaye baphile. Kwaye kunokusinceda ekusasazeni ukuba umyalezo ngokusayina ukuba abe yinxalenye yeqela lethu Street kwincwadi. Nantsi loo nto iza kusebenza njani ... 1 - Faka APHA. Makhe ukwazi ngakumbi ukuba, kutheni ufuna ukuba abe yinxalenye yeqela, yaye ukwabelana nani eendaba zentlalo kunye namanye amakhonkco ngekhompyutha kunye nathi. umvakalisi wam uya kwakhona isicelo ukuba abanyuliweyo ... 2 - Funda incwadi ethi kwangaphambili. Baya kuthumela ikopi PDF ethi ukufunda. 3 - Dibanisa Facebook Group yabucala. Uya kufumana isimemo ajoyine Facebook Group yabucala ukusuka umvakalisi yam. Pha, uza kufumana Makhesenze umxholo kakhulu ukwabelana nabahlobo bakho. Nazi...
Ndandidlala Varsity ngaske kwisikolo aphakamileyo. Nantso ingxelo kwakuyinyaniso (ngaphandle kokuba ukundinyanzela ukuba ukuchaza umdlalo igama). Ndaya kwisikolo esincinane yabucala, kwaye ukuba ube ophezulu ofumene ibala iqela eyunivesithi. Ndiyamthanda umdlalo yomnyazi, kodwa mna ngcono kakhulu xa uyibukele kunokuba uyidlale. Ndiya kunibetha abadlali bangxole "C'mon!"Kuzo referees bonke-star ubuchule. Kodwa leyo kangangoko uya. Isikolo sam le ulawulo engaqhelekanga kuthekani ukudlala imidlalo ukwenzela ukuba bapase, nangona, ngoko ke kwanyanzeleka ukuba isuti usixhome intloko yam kukudana zonke ebusuku ngoLwesihlanu. Esi zazisoloko ngokupheleleyo imidlalo ekhaya. abazali yimincili nabafundi-abaninzi kubo abahlobo mine- wabonisa ukuba ukuxhasa iqela. Ngelishwa, mhlawumbi wenza kangangoko umahluko umdlalo njengoko wenza. Ndiya ezitsho kungena bleachers ixesha nexesha, emangalisiwe iingcamango zabo bonke abantu, ingakumbi utata wam. Ndicinga waqonda ukuba babini si nje kukho ukubukela, kodwa kwenzeka ukuba isihlalo engcono. Ixesha kuphela abenza ngayo kwi phantsi bekukwangelo ...
Ndandineminyaka elishumi elinesihlanu ubudala kwaye ziyajikiswa ubomi bam ngaphakathi ngaphandle. igama lam ukubonakala ayizange iguquke, kodwa yonke enye into ngam kwafuneka. Ndaba ngumntu eyahlukileyo ngokupheleleyo kunam yayikade nonyaka okanye emibini ngaphambi. Andizimisele xa abantu ukuya ekholejini nokuphinda-ukudala ngokwabo kunye lweziqhulo ezintsha kunye nobuntu; Ndiya kuthetha into ebalulekileyo eye kwi ngaphakathi kwam. Ndiye ndaba ngumKristu. Ndaziva olutsha. Ndaziva ephila. Ndikhathazeke okulungileyo kwafuneka ukwazisa ukuba nabani na ababephulaphule, ingakumbi abahlobo bam abasenyongweni nosapho. Wonke basabela ngeendlela ezahlukahlukeneyo xa utshintsho kum-ezinye ngovuyo, abanye ukuxhathisa-kodwa incoko omnye uye wema kum. Bendithetha nendoda endala ngaye mna ngenxa yokuhlonela kakhulu, bavuyiswa ukubachazela isicwangciso yam yomdlalo imbeko uThixo yokuphila wam, ngokukodwa ubunyulu yam yesini. Ndazama ludambe ngayo, kodwa soloko kunzima ukubamba yimincili yam. Njengoko amazwi yatsiba elulwimini lwam ngesantya nemvelo, Ndinayo ngengqiqo ukuba nemincili wayengekho njengoko. Yayifuna ukuba siphulaphule, kodwa ibinzana yobuso bakhe waphendula phambi kwakhe ...
Nazi onke amazwi ngenxa yesihlanu Vuka studio album Uhambo ngayo. Klikha kwisihloko ngoma ukubona lyrics for kwingoma nganye. Konwabele kwaye sabelane kunye nomhlobo! 1. phakama 2. izibane On 3. Shweet 4. Manolo ft. Lecrae 5. Wena Musa Yazi 6. Bonke Rise Up (Khaniphulaphule) 7. Bonke Rise Up 8. Beautiful Life 2 (yam) 9. Insomniac ft. andy Mineo 10. into Entsha 11. uLazaro ft. This'l 12. Zonke Love ft My. Natalie Lauren 13. Ndimkile 14. Sweet Victory ft. Dmitri McDowell noLeya Smith
umkhondo 14: Uloyiso Sweet
Hook: (Dmitri) Ndiziva ngameva apho isithsaba yam ndiya kuba buthathaka kodwa mna ngokwabaphile uthuli kude kuse ewe ndiya kusinda kuba ndi Sweet Victory Akukho mntu ubuhluthayo kum uloyiso uNozala Sweet ndafumana, uloyiso elithozamisayo yeah Vesi 1: Uyandibona na nimbaxa , Ndiyazi uyandibona na nimbaxa Undixelela ezi CDs, kodwa bhuti mna amadolo nzulu kulo ndiza kweentaka ndibuthathaka, ke mna ixhomekeke ndingathanda siyakuhlalela amazinyo am ukuba ndisithi musa gatyeni njengokuba ndibhala ezi imigca mna kufutshane iinyembezi umzimba wam khange ukusebenza kunene iminyaka esixhenxe Ngoko uthe kum ukuba 'sihlale nasesilevini sakho zama ukuncuma "Bruh mna amabini anesithandathu, Kufuneka bazive ngcono ngumntu imayile Gcina zonke ezinoburharha zakho kuchaphulo cute Ndiza Kwathi clichés ngenxa amathemba oyinyaniso, nguye kakhulu zeon Hook Post Hook: Sinzele uKumkani, abaxinezeleke ukuba isilingi Ukuziva ezilungileyo gon 'ukwenza ngayo ekugqibeleni uloyiso Sweet uyandiva, Holla ukuba wondiva Thina lusasebenza nangona nimbaxa Sweet uloyiso Unobangela thina ngokuphumelela, yeah niyazi ngokuphumelela Nangona wayediniwe thina ...
umkhondo 13: Ndimkile
ivesi 1: Yinto ethile engqondweni yam onalo ngephanyazo? Soapbox river, Ndathi kanye phezu kwayo ndithe kwezi ntambo kwaye Ndidiniwe ngayo (imoto ingxolo) Ndiyazi usiva ezi amavili uhlikihlo krizayo phantsi kwendlela, uwe ukufumana baphambukayo iyelenqe ndisinde, Ndicinga ukuba oku mini 'Kuba mna sebukhobokeni na ubuxoki yakhe embi wayefuna ukumkhulula ngokwam kodwa ayizange ihlatywe Fumana em eliphezulu, ukufumana em eliphezulu, ukufumana em vacane eliphezulu emzimbeni wam, hayi mna iziva ubuxoki Bathi Mna amtyuba kwaye bakwazi ukugxeka Ke mna ndithandaza bexhela, Ingathi ayisafiki engekasweleki Phambi kokuba siyancwina, uze uxelele abantu ndiza imka ndithetha kwinkxalabo owoyisiweyo Khwezi, uyazi yena engalunganga ndiyazi ukuba ithe ebuzwa ukuba ayichithe efownini Ngaba kuphosakele ukuba ukwahlukana kwi ingoma? Hook: Mna ndive izinto esithi, kodwa andikholelwa ukuba kuba nawe nje ukuba uyaxoka, kwaye akukho mfuneko yokuba ndithe ndafumana iNkosi entsha, Ndiyazi mna ndibona wena Kodwa ndibona kunene ngawe, ngoko mna funeke ndikushiye (Phinda 2x) ivesi 2: Zizihlandlo ezingaphi na mna funeke Ndixelele ...
umkhondo 12: Zonke Uthando Lwam
Intro: (natalie) Ndiyabona ukuba ukubukela Ingaba ungathanda ukuba ubona? Ngaba ukubalula? kakuhle, sorta kinda mhlawumbi ntoni na engqondweni? ubuso bakho ukhangela eziqhelekileyo ndibona wena lonke ixesha yaye ndakukwazi ukuwugcina ukuba inkampani ngokuhlwanje wu funeke akuxeli Ngaba akukho mntu wumbi ngeenxa ukubukela Ewe yitsho nje ilizwi kwaye wawusifumene ngawo Kanye apha, ngoku Ivesi 1: Jay lalililolo Kwaye ufuna uthando phezu umnatha Indoda uneentswelo, oko ukulindeleyo? Walunguza onke amaphepha abo Ke kaloku bafumana indoda yakhe waphulukana nokuphefumla kwakhe Cause ukuba uthando kule emehlweni lokuqala xa badibana intliziyo yakhe yayibetha ngamandla Esaphila kinda ukukhanya ngebala, amehlo ngokungathi wazithanda Ayikwazi alwe nabo iimvakalelo xa akubethe oku kunzima Yinto umgama omde, ngoko ke kunye naye intanethi lonke ixesha Nguye emsebenzini kodwa le ntombazana Yiloo engqondweni yakhe ngalo lonke ixesha Akanakho abalindeli ukubona ukuba, naye wa kubo nezinye iimpawu Xa bebonke ke abanangxaki yena funeke umvuzo kunye Visa homies bakhe bamlumkisa "isantya laa mfazi akakwazi kuyizalisa kuwe" Kodwa ukuba kuloo mdlalo uthando ke musa ...
ivesi 1: Umfana Yangcileza phandle engcwabeni molo mna sele belele ngokuba elide ndiza kuzamla Wonke umntu ethetha uzama ukundibona, ukungakholelwa Like indlela ukuphefumla? Yena iinyawo ezintandathu Boy ngokunzulu oko esithi? Bamba amvalele umlomo wakho amadoda Abafileyo akakwazi Holla, into uthetha kwinkxalabo? 'Isizathu kanye kuloo mnyango kubhaliwe singahambi kuphuma ke mandithathe wokubuyisela ixesha kwibhokisi yam ngoku Yhu ndiyazi unuka kuyo Unobangela emoyeni ndithe engcwabeni ixesha elide kakhulu ndifunga Abantu bedanduluka ndiya ezingekhoyo, obituary kubhaliweyo ubuso bam luthuthu, abanako ukuxelela umntwana wakho ukuba avuke Vala ibhokisi, kubiza iNtshumayeli, yena ke waya Yinto phezu abakwazi mntu ukufikelela kuye, ndithi elide Kodwa wayibamba, phambi kwakho kukhala ndabaleka ndeva umntu esiza, esithi into umkhwazo, "phuma" Pre-Hook: Yangcileza ephuma engcwabeni, molo mna sele belele ngokuba elide ndiza kuzamla bamngcwabela yisuti emnyama kum, tie black Mna ubomi mna ndivuke ukukhangela ukubhabha Ngoko ukususela ngoku Hook: Ukususela ngoku unako uLazaro umnxeba Ukususela ngoku unako nindibize uLazaro Ukusuka ...
umkhondo 10: into Entsha
Uqalo / kwisampulu: Bambelela, nokubamba Makhe ukufumana enye (Phinda 4x) ivesi: Boy uyazi ndinawo J ngayo, rock kubo ngeenyawo zam Wabanjwa phezulu NDLANYA, babengamazi kwam ukugqibezela Uyazi ukuba ndinawo 5 kwaye ndifika nje 12 kodwa uyazi kubo 1 andiyi ndandifuna ngokwenene ezinamaxabiso Ngoko njengonqakrazo isibini engakumbi kwisiza, ndide ndikhathazekile kanye Bruh mna funeke ukugcina inyamakazi yam Sneaker ngokuqinileyo Ukuba wonke wawathabatha ceilingceilingceilingceilingceilingceilingceilingceiling ukuba into Ndiyayithanda ke wonke wanna kuba nam endaweni Mike likhoboka lam ababaninzanga abasetyhini okanye Sneakerheads kroboka abangaziwayo, Ndiza sokudlathuka ezinye izihlangu Yifake kwikhadi lam, A ndi ndafumana nto kuphulukana amaxesha ndandiye ndithandabuze ukuba yintoni wanna I ukungqina Kuba mna wan't into entsha Into Ndinayo andiyi kukwenza Ndicinga ndafumana kinda umkhuhlane Cause Ndiyakuthanda Ukubukela ukuba amatsha Ndaye kum ngathi Outro / isampulu: Yeah lindenze ngathi Babambe, nokubamba Makhe ukufumana enye (Phinda 4x)
umkhondo 9: Insomniac
ivesi 1: Ndiza namhlanje Oku MY umfanekiso kuphela ubomi bam onokuphelisa namhlanje Yeah yam stop intliziyo Ukuba kuphuma ngokuhlwanje ndiza phezu ndiya kulinika bonke obu bomi zonke ndafumana ngoku Yessir yima umzuzu bruh ndiya ubone y'all rocking ngezandla zakho Ukulinda eliphezulu ukuba beat ukuzikhulula, 808'S kwi yokulinda xa ndiza uphefumla bangers ndithi iingxelo ukuba ndimi ngumhlaba gon ukushukunyiswa xa beat yokuyeka, iivoti Makhe off ngomnxeba yam ndiziva ngayo, Ndiziva ngayo, Ndiza yayichwayitile kakhulu Njengokuba mna irhamncwa Kanye igorila ngubani ngokwenene ukwesona Ngoko ndiza yaye phezu Ndiyakube uphumle xa ndikunye Phakama uye usile koko ndisenza Bruh yiloo nto Ndanibhalela ingoma Ngokuhlwanje ndiza uziqhube ubomi bam ithatha nje ubusuku bonke, Ukuba andithanga ndivuka kusasa, bruh ndiya gon kuba Jula qaba isilumkiso umoya Makhe siye thina kwinkxalabo ukuya Akukho luyehla, thina gon kuphumelela Akukho luyehla, siyamazi Siqhayise Pre-umlobothi: Ngokuhlwanje ndiza esichengeni yonke ukulandela Ke ukuphila ubomi bam ...
umkhondo 8: Beautiful Life 2 (yam)
Intro: Oh, ndiyakuthanda, yhe Ngokungafaniyo nezinye, ewe Xa ndibona u yancuma xa kukhanya kanye nje ihlobo, yeah Ivesi 1: Uyazi ukuba imvakalelo xa kubo amazwi kukuyekela Kunzima ukudibanisa into Ndinqwenela ndithi Ukuze izinambuzane wam, indoda yam encinane kunokumdla baby kwintetho, Andazi ukuba yintoni na ukuba uthi Kodwa ukuba umculo ezindlebeni zam nangona Boom bap ukuba utata wakho xa ndikunye kufuphi nangona Mama ndinifake kubo polos kunye skinnies olugobileyo zasendle eliphetshethwayo, ube iflaya ngaphezu Leer nakuba Umelwe ukuba mixed kid river phezu kwabo ngathi mama wakho utata wakho phezu kwabo Tye phandle esizalweni kuni ngokwenene ezintsha nzima wenjenjalo ukudanduluka ndide na iinyembezi ekhohlo Ukususela ngoko ugcine uncumo ngobuso bam Wrestling esina, zasendle esikhundleni Khangela Ndiyazi onalo igama lam Kodwa ndifuna enxibe eliphilayo yakhe udumo lwakhe, Ndiyakuthanda Hook: Oh, Ndiyakuthanda Ngokungafaniyo nezinye Xa ndibona u yancuma xa kukhanya kanye ehlotyeni kuba umbono bam esicace hayi hayi hayi uNozala umhle, nto ayimangalisi Ndiyakuthanda andikwazi ...
umkhondo 7: Bonke Rise Up
isampuli: Ukuba yonke sivuka, oh yeah oh yeah (phinda) ivesi 1: Ndiyazi mna uyanqena ukuyiphatha bro mic Kodwa kule nzuzo yinto yokuba ndiza kulwa ngokuba mna ndihleli kwilebhu nale usiba iphedi Ukwazi ndiyifeze lokugqibela, loo nto ngokwenene nto ndibhala Hamba thoughLet likaThixo ngexesha '04 ndadibana 116, ngokukhawuleza ndaba kwibhodi Fast phambili kwiminyaka emine, thina kuhambo Kwaye ke asazi nje oko wayenako ukugcina Kodwa ngoku apha iminyaka elishumi thina kamva, zikhutshwayo wafumana Bonds mkhulu ndisakusondela, plus nto Abamthiyayo ngaphezulu sithi yenze ngenxa intlama, kodwa andiyi kuyaphula nathi 'Isizathu iNkosi sikhonza kunye flow liyababala kangaka Ke ndithi ukuba bayandibuza ukuba kutheni Ndiyenza nabo Ntombikayise umculo intshukumo Ewe mna ndithetha ngokuba yalila yam unashamed Oko kuya kuze ndiphathe eqongeni kodwa ngathi bahamba sinobomi yakhe Vuka Pre Hook: Ukuba sonke ukunyuka upThat kuba iphupha lam Sonke kufuneka kuvuka umnike emi O ukumkani isizathu nguye okulungileyo Oh yeah, oh yeah Oh yeah,...
umkhondo 5: Wena Musa Yazi
Uqalo / kwisampulu: iintsuku Ezinye Ndiziva kufutshane kwemihla ethile kubonakala njalo kude Ngokuqinisekileyo ukulunga nenceba uya kusoloko kulandela Kwaye akazange abuyele engento, oh Haleluya ngokuba indumiso aphezulu ndiya kulinika wena ngovuyo yonke imihla yam Masithembe ukuba ubomi bam bonke lidlulisela ukuba kuthetha lonke ilizwi, owu Nokuba ububi kunye nam uYesu, Oh uYesu, Yesu yam, Yiyo loo nto ndiyakuthanda ukuze Vesi 1: Boy Ndiziva ngathi mna, Ihla Ukubaleka ukuze nonyulo yam ukuqinisekisa, Obama Biden (Yifumane?) Ngemihla ndiya homiciding Ukubulala ukuba villain ngaphakathi kwam, Ngamanye amaxesha kuba traumatizing (akukho nto?) Kodwa bhuti nto ayimangalisi loo nto izisa ulonwabo xa Ndinamathele ilizwi lakhe mna kwedinga ekhwele Ndiyanithembisa ukuba sele ndizisole xa ndinganyulwanga ukuba yokuhlala bendikhe bangakhuseleki, kodwa mna kuye ntonye: Mna ekufihleni Ndivakalelwa ndafumana umngxuma lowo ukumgibisela umthunzi, kodwa mna kwabe kuba ndiyazi uNyana Ndivakalelwa ngathi mna baphupha etyhilwe amehlo, iingqondo zam lencopho Gliding ngokuthi kuyenyuka isibhakabhaka, ilifu 9 oko ocean Swimming bam ngaloo ozone umaleko Hey mna efunxa Kodwa wazilumeka ukuba umlilo phantsi lam emva mna ukutshaya Ayikwazi ...
Hook: Ndiya kukwenza ngenxa lithuba up Got ukuba ammo itshixiwe lolayisho I akathethi akukho inkcukacha Flip a iphepha, Ndiza du Ababelushicilela ekharejini in Manolo (nolo) Manolo (nolo) Manolo (nolo) Manolo (Phinda 2x) ivesi 1 (uhambo): Ukuzama ukubaxelela amakhwenkwe Andizange ukushiya uNozala ndedwa wesitali Ndizigcine enye imoto yam mna ababini ekhaya Bona iintlobo ezahlukeneyo, kodwa benze into enye ngohlangothi kabini, umphanda kabini, bang bang mna apha ejongene neempungutye, Mna ayiphumi engqondweni yam Beza umphefumlo wam, ngoko ke kwinkxalabo xesha Them ubuxoki ke afuna ukundibulala, ukuba anikholwa ndim andikhathali, Andikhathali, Andikwazi yithathe lula ndiza kunokuflipha page, Mna umnyele-sonwabe iklip kunye gauge Ukunqakraza ngayo, ukubetha iqonga Betha kuwe inyaniso, yayo yonke ibinzana Yena andihlaba nzulu mna diving, Mna ukuntywila Xa ukhwele ndifumene ukuba umlilo ngumlilo, Mna bephila kwakhona Hakisha Vesi 2 (Lecrae): Manolo Manolo, Ndiza apha uza yeposi amaqabane bam bacinga Ilahlekile, mama wam Ndicinga mna loco Ndizigcine shooter wam osenyongweni nakuba, uyazi ukuba ngokupheleleyo ...
umkhondo 3: Shweet
Hook: Fumana izandla emoyeni Yenza ingxolo encinane bumi ukuba kukho Siqhayise phezu Godman ukuba nesibindi, kuphela xa kuni Oko kunganyanzeleka ukuba shweet Kuthekani ukuba xa uzigwagwisa ukuba andikho 'kwinkxalabo iimpahla kunye tags? Oko Ndingathanda ukuba shweet Kuthekani ukuba xa uzigwagwisa oko kwinkxalabo kuye ngubani owokuqala nowokugqibela? Ukuba Post Hook kunganyanzeleka ukuba shweet: Ndeva bethetha ngathi ashushu umntu othile wawathabatha nkuleqhu phezulu, ngaloo ephumayo കണ്ണാടി Jonga andikuthandi ukubaxelela ukuba akakho ngcono Lilungile ukufumana umbrella, UThixo uyalawula Ivesi 1: Masiphinde siye ngexesha yee- kwexesha D edolophu phantsi, loo apho undenze Xa emva phaya, Ndi na uVaca-ngo- (awayeye) Ndijongile nje mna ekhaya, ndicinga ngo kuhlala, I singakutyesheli nangona Yhu sele sele Lone star karhulumente ethe, njani mna uyilibale Kodwa ke ukuba izakuvelisa phandle emsi Yinto ukubhabha indlela Wandiphingela, I Andithethi kwinkxalabo nesihlangu, hlumelo ndafumana ezininzi iingxaki kodwa mna ngqo, oko shweet Ndiyazi ukuba uThixo wam kuEdom nabo echibini, loo nto shweet zizihlandlo ezingaphi funeke ndithi kuwe ...
umkhondo 2: izibane On
Intro / isampulu yho yho, ukukhanya thina asazi apho siya khona (phinda) ivesi 1: Khangela ngeenxa konke mnyama, bonke abamnyama yonke Ngokufanayo izigidi indoda hambo, kodwa mna ndithetha kwinkxalabo yonke Dark iintliziyo, imiphefumlo mnyama iingqondo Dark ukubhala uhamba ebumnyameni Ndicela ukukhanya encinane nangona? Ingaba loo nto mna kunilwela? Hey thina eyimfama ukuze asazi ngaloo ngohola siye Hambani isantya ngokupheleleyo phambili, luphaphazela kodwa sityhafile Kodwa asazi nje into yokuba wayezuza kwivenkile, hayi ngaphezulu esiwa ngenxa uC.M Doke Okie Nope, uya kusinika emehlweni ngezinto zange ndabona phambi 'ade ukukhanya ukufumana ukuba amalahle, asazi apho siya khona Kodwa ke akukho kwimephu google ubomi, kwaye loo nto ifana izibane zethu Ubungqina eyaphukileyo: thina ebengezelayo, edlula kwi butyebi leyo zegolide Kuba abathile nickel nobhedu, uzama ukufumana uzuko nto ebiweyo avune into ayihlwayelayo Hey sonke simelwe amaphupha, lo wam ndiya ndithandaza ukuba akanakuze akuva ukuba nokucima likhanye, kids abangaboniyo Siyazi wawusifumene ngawo, Nkosi siyazi onalo Kuphela kuni unako ukuluthatha sibe ephakamileyo, ukuba iZibane pilot nceda Hakisha Thina ...
umkhondo 1: phakama
Hook: Namhlanje yiloo mini xa sivuka iankile wam owada undilinde kuphila Sisonke kuma nxamnye ubuxoki evuthayo Ke ngoku ukuba ndiyifumene amaphiko yam ndikulungele ukuya Vuka, sonke kuvuka yho yho yho Sonke ukunyuka yho yho yho Vesi imini Vuka Namhlanje 1: Nokubamba Mna umva ukuze baqhayise kwezi kumkhondo ngathi mna bathuka em, ukuze umva zobun ngempama Ungaze qatha engqondweni into Andizange ekhohlo mna bebabaza Phulaphula phezulu sasekunene kuni akuyi funeke kundibuza kabini ndilapha, Ndiza apha ukuqhayisa kuye ngathi mna eyaziwa ngokuba Nangona abantu rhona Mmelika ndiye kuba uThixo wam akukho lwemveli, Kuba yena ngokwenene, yena wokwenene Ngoku nesihloko esandleni ndiyazi ukuba umyili, nguye ngaphezu NGAPHAMBI zibhabha phezulu emafini ke zenzelwe ngezandla zakhe mna ukubhala ukukuxelela ukuba obu ubomi flash okungepani Indlela Mmelika umhlala xa sifuna Cryer ukuba usixelele ukuba Vuka, ume? Khangela yo izicwangciso dude My, ukuba ngamangcwaba hayi kwikhaya lakho kunibangela Yindlela komhlaba elide kakhulu ezintandathu nzulu kunye umhla ilitye yakho Bonke bathi,...
Coulda Been Me ezipheleleyo
Iveliswe: Gawvi Vocals Olongezelelweyo: J. Paul Artwork ngokuthi: Alex Medina Mixed wabagagamela yi: uYakobi "Biz" Morris Ivesi 1: Musa mntu wanna kuva iintlungu zethu Oko indlela endivakalelwa ngayo xa ndi- kukroba kubo Twitter izimvo, bonke ndiziva imvula Baya endixelela kudlula kuyo endala Loo nto musa zingasekho Kodwa musani ayinyaniso xa ndijonga kwezi ezitratweni Ngoko ngenene xa ndiziva ngathi oko coulda waba nam Hook: Umntu ndithi kuni, ukuba mna uziva ngoku Uha Ndinqwenela ukwazi indlela endivakalelwa ngayo ngoku ndiziva ngathi oko coulda waba nam ndiziva ngathi oko coulda waba nam Sonke eyenziwe ngomfanekiso kaThixo niyazi Bonke ubomi bethu Akukhathaliseki, Umbono wethu bazimpula Siziva unobangela ebuhlungu apha phambi Ngubani omsulwa andazi Kodwa coulda waba nam ndiziva ngathi oko coulda waba nam Ivesi 2: Andikhange ndazi Mike Brown I Andazi Trayvon Andikhange ndazi Sean Bell Kodwa ndiyazi ukuba bemkile I Andazi Oscar Grant okanye Tamir Rice Andikhange ndazi Eric Garner Kodwa ndiyazi ukuba Ubomi abungaphezulu kunabo ...
Intliziyo yam enzima. Ndiyazi ukuba uThixo ulungile, kwaye Yena olawula, kodwa intliziyo yam enzima. Kwiveki ephelileyo emva iziganeko Ferguson (kunye neempendulo kuyo ku loluntu sasazo), Ndaziva ukuhlutywa ukuba abhale ingoma. Ndandifuna ukuba enze naziphi na iingxelo uzukileyo nezibhengezo, kodwa ukuvakalisa indlela yonke yandenza ndizive. Ngoko ndaqalisa ukubhala, kwaye oku ke oko kuphuma. Ivakalelwa ukuba evakala engqondweni yam: "Inokuba ubukhe kum." Kwafuneka yonke isithuba ukulungele indlela amaKristu afanele ukuphendula ngamaxesha ezinjengezi, kodwa emva kokuba iindaba malunga Eric Garner izolo, Ndagqiba ukuba alinde nasemva ukuba kamva. Okwangoku, Ndifuna nje ukuthi ukuba intliziyo enzima. Andinamdla kwiingxoxo okanye iimpikiswano ngoku. Ndifuna nje inkululeko ukuvakalisa ukuba ndihlelwe bububi. Ndiya buhlungu ngenxa yokuba Eric Garner yevidiyo ndiliphanzisa ukubukela. Xa mna nomfazi wam wokuqala amlinda oko kwiinyanga ezidlulileyo, zombini sadanduluka. Ubomi sisipho esihle, kwaye Ufanele ukuba bagade obomi umzimba bomntu - ingakumbi xa kuthatyathwa ngamanye amadoda. ndicinge, "Ngokuqinisekileyo abantu abanakho ...
Book New chafuko
Incwadi yam entsha, phakama, uphuma January 27! Kuya kufumaneka naphi zithengiswa iincwadi. Uyakwazi kwangaphambili-order ngoku kuvelela website kwincwadi Risebook.tv. Ndiyathandaza uNdikhoyo uya kusebenzisa ukukhuthaza isizukulwana sam ukuba phezulu kwaye baphile. Gada erhuqwayo ngasentla kwaye ufunde inkcazelo emfutshane ncwadi ngezantsi: Society uthi ulutsha eli lixesha engakhathali self-ibinzana, kodwa Trip Lee uthi uThixo ngokuba wonke umntu avuke ubuthongo, ngasentla sezantsi, kwaye baphile uKumkani uvukile. Ihlabathi isixelela ukuba iminyaka yethu yokuqala kufuneka nakanjani gqitha kunokuba enikelwe onenjongo. Thina nto uyixelelwayo ukuba uxanduva nokuzinikela ziyimithwalo ukuba ukhutshwe ixesha elide kangangoko kunokwenzeka. Kwaye, uninzi kuthi ulutsha lwethu lusizi ubuthongo-olele ubomi siza de kwanyanzeleka ukuba sivuke. Ingxaki kukuba ubomi sele iqalile. Oku ntoni ngoku. Wathi uThixo wanibizayo ukuba aphile ngayo. Kule ncwadi enamandla, Trip Lee zikhalazela lixesha lokuba sivuke aze avuke, ukuba baphile ngendlela sadalwa ukuba baphile. Young okanye omdala, siye andibizwanga ukuba ubomi kuye. Ngoku. amakholwa Young liyiphendule ...
Shweet Iphepha lodongo
Ukugcobela uyakube oye Nibonile album zakutshanje Uhambo ngayo, phakama? Balinqakule le shweet lodongo yefowuni yakho ukuze ungakufumana nani lonke ixesha. Umxokozelo iPhone Iphepha lodongo
Xa Abaphumeleleyo Jonga pempe
Yintoni abaphumeleleyo kanje? Ngaba omde okanye omfutshane? Black okanye amhlophe? Ukubabomelele, bangamaphakuphaku? Ndiyaqonda ukuba ixhomekeke koko ukuthini "ophumeleleyo." Mna ukumvumela ibali ophumeleleyo omnye kule nyanga edlulileyo njenge ukufunda ende, kodwa biography nezisebenzisayo of Michael Jordan. Ingxelo eneenkcukacha Wandikhumbuza kutheni phithi abantu abaninzi kunye naye ephelela unqulo hero. izinto ezininzi enokuthethwa "airness yakhe" kodwa akukho mntu unokuze ibango ukuba akukho ziintshatsheli. Ngaba Yakhangeleka ziintshatsheli ngaphambi zonke ezo emakhonkcweni ubuntshatsheli, nangona? Njengoko ufunda le ncwadi, kwakuye kucace ukususela ebuntwaneni bakhe ukuba wayeza kuba yintshatsheli. Enoba sasiyintoni umdlalo wakhe obalaseleyo njenge league umphanda encinane okanye Varsity junior ngumdlali basketball; umbuku kwisikolo esiphakamileyo okanye umdlalo wakhe ngokuphumelela shot ebudeni bonyaka freshman wakhe unc. Xa ndafika kwizahluko malunga ubuntshatsheli bakhe Chicago Bull, bekungekho ezothusayo. Umbhali wathi ibali lakhe ngendlela eyenza kucace: EYordan wazalelwa ukuba ziintshatsheli. Kwaye nantso into siyamazi ngenxa: ngokuphumelela amakhonkco ezintandathu ubuntshatsheli, MVPs ezintlanu, kwaye 14 Zonke ...
kwiinyanga Isibini ezidlulileyo ndingakhange wonke ngokuthi libhengeze album entsha kraca, "Kuvuka." Ongayiqondiyo ngayo indlela kunzima ukuba wayethule phambi ileyibhile wam ndaya zoluntu. Yelicwecwe Wayefunda imisebenzi ngaphezu konyaka, kwaye mna ukulinda ukuxelela wonk 'ubani - ngokukodwa abo waqhubeka ecela xa esasiphosa into entsha. Impendulo ngoko kude kube akhuthazayo ngokunzulu. Ndivuya gqitha ukuba abantu baye baqhubeka ukuxhasa nam nangona ndikhe abahle cwaka iminyaka emibini edlulileyo. uthando lwakho nemincili landile kuphela am. Retirement Early Enye iimpendulo mna kusimangalise ngokuthi oku omnye: "Yima, Ndicinga ukuba umhlala?"Lo mbuzo undilandelayo ngeenxa njengesithunzi. Ndiye wathetha ngayo udliwano, tweets, kunye nezithuba blog, kodwa ndiyazi ukuba Akukacaci ukuba abanye. Makhe kuqhubeka ukuzama ukubeka ngqo irekhodi: Andizange umhlala. e 2012, Ndabhengeza ukuba usaya "unyathele kude umculo." Ewe,, Ndiyazi ukuba izandi umhlala-ikhe-, kodwa ngabom akazange ukusebenzisa ukuba ilizwi. Ndazigcina ngabom ezingacacanga kuba mna ndandingekho 100% ukuba oko bekuya kanje. Ndiyazile...
baqhayisa Iphepha lodongo
Kufuneka njengesikhumbuzo ngemihla ukuba zakhiwa uqhayise? Siye lalungisa wallpapers ezimbalwa lefowuni yakho, ipilisi, okanye desktop. Kukho iindlela ezintathu ezilula ngezantsi kunye logo baqhayisa. Kukho ngaphezulu ukuza kamva. vuyela! Umxokozelo iPhone Wallpaper • Umxokozelo iPad lodongo • Umxokozelo Desktop lodonga Kopa iPhone lodongo • Umxokozelo iPad lodongo • Umxokozelo Desktop lodonga Kopa iPhone lodongo • Umxokozelo iPad lodongo • Umxokozelo Desktop Iphepha lodongo
A Baleka zeyure
Kubo bonke ubomi bam, Ndakhe ndathi ndigqithile amaxesha xa bendikhe ngokwenene eyabangela ukuba ubale. Xa esikolweni aphakamileyo Ndandifuna nje ukuba Buff yanele ukuze amantombazana (ndisilele). Kwiinyanga ngaphambi komtshato wam ndandizama ukusebenza kwam umzimba beach lwasemva. Kule mihla, Ndizama nje ukuqinisekisa Ndihlala elidlulileyo kumashumi zam. ezithethelelayo zam ziye zatshintsha kule minyaka, kodwa oko ayikatshintshi yindlela akaguquguquki ezo nezizathu ezixhasayo. Mhlawumbi sele ngokwendalo ozimisele ukuba asebenze ngaphandle-amayeyeye ukuba nabahlobo bam ngeposi pics and videos of irejimeni yabo noqeqesho ngosuku ngalunye. Kodwa ukuba ufana nam, izizathu zakho, ndikuhambise ngathi itakane kwitrampolini. Kuthekani ukuba iziphumo kwi umsebenzi wakho ngaphandle lwathabatha ngonaphakade, nangona? Ngaba ubuya ufune? Ukusebenza ngokuzimisela Ngexesha Winter Olympics nyanga iphelileyo ndibe bubuso njengoko ndabaphaphelayo imibane bobsledders ekhawulezayo kunye snowboarders highflying. Ndandithanda egqwesa lwabo lwezemidlalo, kodwa Ndada gqitha xa ndicinga malunga noqeqesho siyaqeqeshwa kufuneka ukuba athathwe ukuba kukho. Ekupheleni kwesiganeko ngasinye xa iimbaleki noloyiso wema phezu obephumelele ...
Umculo yinxalenye enkulu yobomi bam ngoko ndisoloko ndicinga ngendlela ukusebenzisa nto ingcono. Kunzima kum ukunandipha yobugcisa ngaphandle kuhlalutywa, ukuthatha amanqaku, bebuza imibuzo. Beyonce noqwalaselo isizwe sethu ngoku yaye ukuba yayingomnye iinkwenkwezi zethu pop eyona oyintanda. Eli nenekazi lokuqala nokuba uthe ukuba abe ku nabani na ongomnye, ndimbuza bafuna ukuba Beyonce. Beyonce ixhaphake kunaye nto wakha, ukuze ungaguqukeli umabonwakude okanye ukufumana Intanethi ngaphandle ebona nto ngayo, kuvandlakanyo album yakhe entsha ifoto yakhe ehamba phantsi esitratweni nentombi yakhe. Ndiyamthanda yi italente yakhe kwaye iphefumlelwe saqhutywa, kodwa mna kwakhona Amangaliswa ndibona izinto. Beyonce ndiya kwenza ndineendawana ngokufanayo. Sicela kokubini eTexas, kwaye amaqashiso yentsapho Houston. Sicela zombini Amagcisa Ndiye wakhululwa ngeenxa inani elifanayo albums solo (nangona nje kancinane eyaziwa kakuhle ngaphezu kwam). okokugqibela, sibe sobabini aboni odinga ubabalo lukaThixo. Unoko engqondweni, ukuba ndithe ndafumana ithuba ukuhlangabezana na kuyo ezi eminye imibuzo ukuze ucele, abanye ...
Ndiyakuthanda wayethetha ukuthanda kukaThixo ebomini bethu, kwanaxa umntu akavumelani nokundixelela. Ukuncokola Ungafumana ixesha lenene ngokukhawuleza nangona-ingakumbi xa uthetha ngemiba edala. Yinto akazange kumnandi ukuxelela umntu ukuba ucinga sesingalunganga. Ngoko zama ukuba qaphela ngamazwi am, kwaye nje balathe oko utsho uThixo, kunokuba iimbono zam. Kanye clockwork, nangona, ngaxa lithile ebudeni incoko, baza ndisikhuphe inqala: "Kodwa oko iBhayibhile ithi ukuba bagwebe? Nawe ngethuba nidlobe phezu ndinyana, huh?"Zange lutshitshe. kuMateyu 7 uYesu uthi, "Musani ukugweba, okanye nawe uya kugwetywa. "Kwanabo thina zange ndayiva ukufunda iBhayibhile azazi le nxalenye intshumayelo ilizwi lakhe ilizwi. Lo isenokuba Ivesi eyaziwa kakhulu kakuhle iBhayibhile namhlanje. Kwaye kwakhona kuba asenokungaqondakali abaninzi abawuqondi le vesi ithetha thina lungazi njani kodwa ubumele ukuba sithandane. Ngoko ke kubalulekile ukuba sizibuze umbuzo: UYesu uthetha ntoni xa usixelela ukuba bagwebe? Oko akuthethi veki iphelileyo, Mna nomfazi wam saya workshop lomtshato ecaweni yethu. Njengoko ...
Kutheni ndatshata Intombazana White
Nanini na emva imifanekiso intsapho yam eendaba zentlalo, iimpendulo zisoloko fun. Eqhelekileyo inkoliso, "Unyana wakho mhle kangaka!"Okanye" Yintoni usapho entle!"Kodwa elinye iimpendulo eqhelekileyo, "Ngaba umfazi wakho ezimhlophe?"Abantu bacela kum ibonisa ngamanye amaxesha kakhulu. Impendulo nguewe. Umfazi wam bayi- Hungarian, IsiTaliyani, nesiPolish-ukuba abantu abaninzi nje ewe, emdala amhlophe. Oku awungeni kwezinye, kodwa ezothusayo okanye ekudanisayo kwabanye. Andiqondi ukuba umntu kufuneka othuka okanye yokuphoxwa imitshato ukutshatana, kodwa nangoku ndifuna ukuthetha kutheni ndatshata ngaphandle "ugqatso yam. Isigqibo ukutshata nomntu ukusuka nemvelaphi eyahlukileyo uhlanga kwakungekho namnye lobutsha kum. Andizange ndahlala phantsi, wabhala ngaphandle elungileyo nengalunganga uluhlu. Nangona ukuba wenza, into yokuba umfazi wam zange wabona elidume "Martin" iya kuba con kudidi. kodwa enyanisweni, Andizange ndichithe phezu okanye bafune icebo malunga nokuba kuyinto. Ndeyiseka ukuba umfazi kum batshate, nangona wayengekho abamnyama. Abanye akasoze cinga ukutshata nomntu asinguye nobuzwe enye ...
5 Imigibe Social Media
ngeposi yeeNdwendwe ukusuka Jessica Barefield Makhe uqale ngokunikela isikhanyeli. Eli nqaku ayikho ngendlela embi eendaba mpatheko. Isetyenziswa ngokulinganiselweyo, ngentliziyo ekunene yokuma, kunokuba yinto entle. Ingongoma kweli nqaku ukubonisa ezinye iindlela eendaba zentlalo inokuba yingxaki ubomi lamaKristu ukukhuthaza wena ukuba intliziyo yakho xa kuziwa kwakho eendaba kwezentlalo inxaxheba. Ezi iindlela ezintlanu eendaba zentlalo kwimitsitso iminqweno yethu yesono. 1. amajelo Social ingamosha ixesha lakho Le nto bangevanga ngaphambi kokuba, kodwa kuluncedo eliphindaphindayo. Sikhunjuzwa kwi Efese 5:16-17 ukuba le mihla ayindawo yaye simele senze ukusetyenziswa kakuhle kwexesha elinikiweyo kuthi. Cinga umzuzwana ungaba ukwenza ntoni endaweni ekutshekisheni yonke loo ndawo. Ngoxa lilinde kwi idinga, sikwazi ukugcina uluhlu abantu ukuba bathandazele kwifowuni zethu kwaye achithe loo mizuzu extra ngomthandazo intsapho nabahlobo bethu. ngokuqinisekileyo, ngexesha elinye okanye elinye, sonke unetyala ukuchitha iiyure on Facebook ngemini kwaye ungaze ukuvula iLizwi ...
Xa uza kweli xesha kunzima, abantu abasoloko andazi ukuba ndithini. Isiphumo clichés nantsingiselo okanye iinzame trite ukuba kukonwabisa. Ndiye ebezisoloko ingxaki ungasuki phrases- uhlobo oko akuthethi nto umntu esithi kubo, Okunene ukunceda umntu aziva. izinto ezidengileyo ezifana, "Chin phezulu" "Iyakuba ngcono." Ngokwenene? Wazi kanjani? Wena ke musa ukwenza abahlobo bakho na amalungelo ngokubanika ukukhanya, amathemba afukufuku ukuba ezingasekelwanga nantoni. Xa hits intlungu enzulu kufuneka rock inyaniso eqinileyo ukuze kusixhasa. Ngexesha kwinkxalabo ngumhlaza, Christopher Hitchens wavakalisa inkxalabo efanayo kunye ngamabinzana athile nantsingiselo sizilahla ngeenxa. Uchitha amaphepha ambalwa ehlasela omnye wabo kwincwadi yakhe, Mortality. Uthi, "Ukuthi ngqo, Ndiyeke kancinane ukukhupha isaziso sokuba 'nantoni ingawubulali indenza bomelele.' "Yena uya mgama, "Kwihlabathi ezingenangqondo emzimbeni ... kukho zonke izinto ezininzi kakhulu ukuba bambulale wena, musa ukumbulala ukuba, aze akushiye kakhulu buthathaka. "Ayikwazi uvakalelwa nje uvuyo? Oku kuvakala uxinezeleke, kodwa ndicinga Hitchens ilungile ngengqiqo. Kuyinto kunokwenzeka ukuba ...
Awunguye Lilungisa Kwanele
Wonke ngoku ke ndiza kuthetha ukuba umntu uthi bafuna ukuba ngumKristu, kodwa babonakala becinga ixesha alikho ilungelo. Xa ndibuza ukuba kutheni, ba ndi xelela ngazo zonke izono zabo, yonke kwiintsilelo babo, kwaye zonke izinto ubeko abayenzileyo ngaphambili. Andizange bathi nabo ngezono zabo, kodwa ndiya kwenza yokutyhiliza kokucingelwayo zabo. Kwaye bona babecinga ukuba isono ithile ndiphuncukane nto ukuza uKristu, xa okwahlukileyo kuyinyaniso. Ukuba umoni aliyigcini kuKristu kuthi; oko Naso isizathu simfuna. Ukuba siyalinda sikhangele egqibeleleyo wamwola siza kukha alinde ngonaphakade. Kwenye uphindo zam endizithandayo, Charles Spurgeon usibongoza ukuba bayeke ngokwethu ukuba, kunye nokuqalisa khangela kuYesu. Uthi: "Le! Uthi, 'Ndiya akuthanga uguquke ngokwaneleyo.' Oko ujonge ukuba wena. 'Andikholelwa ngokwaneleyo.' Oko ujonge ukuba wena. 'Mna akakuboni.' Oko uzilumkela. 'Ndiya engafumani,'Utsho omnye, 'Ukuba unayo nayiphi na ubulungisa.' Kuyinto elungileyo ukuthi kuni na ubulungisa; kodwa kakhulu kuphosakele ukufuna ...
Indlela esisabela ngayo umyalezo kuxhomekeke ekubeni ngubani na ukuba iphuma. Makhe ndininike umzekelo. Ukuba owasemzini uhamba kum esitratweni kwaye uthi, "Makhe ukuboleka izitshixo ukuba imoto yakho yokwenyani ngokukhawuleza. Ndifuna ukufumana imali kwibhokisi yakho isikhuseli,"Ndiya mhlawumbi khangela kwakhe nguye crazy uhambe ngaphandle. Kodwa ukuba inkosikazi yam ukuza kum uthi into enye, Ndingathanda ndimnike izitshixo ngaphandle ingcinga yesibini. Simamela kwaye aphendule ngokwahlukileyo ngokuxhomekeke ngubani uthetha. Njani imeko enye. Ukuba omnye wabahlobo bam okulungileyo wamcenga ukuba umele anike igunya bakhe obufezekileyo phezu ubomi bam bonke, Mhlawumbi khangela kwakhe nguye crazy uye ukufumana abanye abahlobo abatsha. Kwaye kuya kuba kuhle ukuba asabele ngaloo ndlela. Kodwa kuthekani ukuba uThixo ngokwakhe wathi nto inye? 2 Timoti 3:16 uthi, "Sonke iSibhalo zingumphefumlo kaThixo." Loo nto na yonke le vesi, kodwa loo mazwi ezintlanu ndithi ngokwaneleyo ukuba sicamngce ngayo ebomini. Isibakala sokuba amazwi neZibhalo amazwi kaThixo ngokwakhe okuphawulekayo. Kwaye ndicinga ukuba abo ...
Air iYordan kukho umfanekiso. Andizange bezinxibile ekhula nangona kakhulu, kuba abazali bam wala ukuba uthenge kum aphakame izihlangu eninzi. Andizange ndiyayithanda, kodwa ndandisazi andizange ndizakufumana izandla zam phezu iperi. Ngoko kwanyanzeleka ukuba ukumelana - ngokuthi ngathi abazange ayisekho. Kuye isibini elide iminyaka ezama ngokwam baqiniseke ukuba Reebok umnqamlezo uqeqesho ezinamagama. Kodwa ndathi abadala, Ndaqonda iYordan kwakunzima ngoyaba. Bonke abahlobo bam baba isibini okanye emibini, yaye omnye wabahlobo bam ithe phithi ziphum nabo. Xa kwafika uhlobo olutsha ngaphandle, wayengathandi nje ukudlula ilokhari Foot basekuhlaleni xa wayekade ixesha; Wakha ubomi bakhe ngeenxa ukufumana ukuba isibini entsha. Wayeqiniseka wayesazi yonke imihla ukukhululwa Jordan, wayeza ukuthenga izihlangu efanayo imibala eyahlukileyo, yaye badla ngokuchitha kusasa ngoMgqibelo alinda phambi evenkile lwesihlangu. Lalibhabha engqondweni yam. Ngoko ekugqibeleni kwafuneka ndizibuze, "Yintoni eyodwa gqitha ezi zihlangu?! Ngokucacileyo ndiza into ekuphosayo kusini na." phithi Umhlobo wam kunye iYordan wenza ingxelo. Nokuba yinyaniso na okanye hayi, wayekutsho ...
Akukho mntu uthanda iidropha igama. Uyazi ukuba ngubani endinco- malunga. Abo abantu abafuna ukwazi ukuba bazi abantu ukuba uyafuna ukwazi. Xa ndicinga "namedropper,"Kukho enye mfo ukuba afike kwaoko engqondweni. Ndiye ndadibana kuphela ukuzalisa amaxesha, kodwa ngalo lonke ixesha sibe sathetha, isiqingatha incoko yethu enyuselwa kunye amathontsi negama ubuvuvu. Uyazi inani kakuhle abantu "ixesha enkulu", kwaye ugqibe ukukwazi ngqiqweni ukuba ndizimele abo amagama kuyo nayiphi na incoko. Nantsi umzekelo. ndithi, "Umntu Hey, Ngubani ixesha?"Impendulo yakhe: "Owu, nto malunga emini. Kundikhumbuza xesha Ndidlale afake elakhe kunye Michael Jackson emini enkulu eParis. "ILizwi? Nyaniseka, loo nto nje igama iidropha ukuba irk nathi nangona. Yinto abantu siqhayisa ngokubanzi. Sidiniwe amadoda ukuva ikhule siqhayisa iintsuku football zezikolo eziphakamileyo zazo (lixesha lokuqhubeka, mhlekazi). Thina masingethi abahlobo bethu Sinelungelo elikhethekileyo lokuba bafumane indlela ethile GamaLamLomsebenzisi yonke indawo zaphesheya atyelela. Kwaye awunalo umonde kakhulu kubantu iinkcukacha kuthi yonke into eninzi zithenga (ngaphandle kokuba sele Rappers, kanjalo). Nokuba nto njengesixhobo ukuqhayisa ngalo ...
Ndikhe akungqinelani kunye Trayvon Martin lengxokolo ukususela ekuqaleni. Njengoninzi kuni ndabukela usasazo iindaba, ufunde amanqaku, wathetha ngawo nabahlobo. Ukuba alawule incoko karhulumente bamqumbisa ingxoxo eninzi ezifunekayo ngohlanga eMelika. Inyaniso ezimbi ngokobuhlanga Undityhale phambi kobuso bethu, kwanabo abaluthandayo ngathi ayisekho kwanyanzeleka ukuba ukuthetha ngayo. Sekuphele unyaka emva, ngumbulali Trayvon iye wazama waza wafunyanwa engenatyala. Ngaba oko kuthetha ukuba kufuneka ayeke kwimiba? Bamfumana engenatyala, ngoko ke aba "nemiba" kufuneka ungabi nje kwenene sasicinga ukuba, kunene? Ezingenakulinganiswa ngakumbi inyaniso. Andinamntu ngenjongo babebangisana izibakala, uphawu Trayvon ngayo, okanye isigwebo kule ngxaki, kodwa mna ndicinga kwengxoxo kufuneka iqhubeke. Ityala i ngaphezu, kodwa akufuneki abe incoko. Kutheni Inzala? Ndiyazi baninzi olucinga ukuba kutheni le tyala ethile iye wathimba ingqalelo ezininzi kangaka. Abanye basenokuzibuza isizathu sokuba abanye abantu abamnyama kangaka ngokukhawuleza ukuvelana Trayvon Martin, nangona ukuba imiba lakhe ....
Kuba gama Ndikhumbula, hip hop enzengayo phithi noThixo kunye nonqulo. Andizimisele ukucebisa ukuba zonke Rappers abo bazinikele zonqulo. Kodwa Rappers bambalwa - okanye amagcisa loo mcimbi - gungqisa i umnqweno ukuquka uThixo kwindawo ethile kwimizobo yabo. Yinto eqhelekileyo yaye kulungile ukuba sithethe ngoThixo, kodwa umbuzo, Yintoni esithi? Abanye baya kuthi, "Yinto umculo nje. Musa kunjalo nzulu!" Kodwa yintoni rapper uthi phezu mic esinzulu ngakumbi kunawe ucinga. Abanye baye basebenzisa hip hop ukuvakalisa inkolelo zabo zonqulo ngokunyanisekileyo okanye intsilelo. inkolo yamaSilamsi, The Percenters Ezintlanu, inkolo yamaKrestu, akanakwaziwa, ukungakholwa kuThixo, kunye nezinye iinkonzo zonke sele kukhuthazwe indlela yobugcisa. Ndicinga hip hop ngokukodwa busebenze ukuvakalisa ukunyaniseka nozinikelo nantoni siza bayayithanda. Ngokwenxalenye ngenxa krwada nezinyanzelisayo inkcubeko ngenxalenye kuba hip hop ivumela amagama, Ngaloo ndlela unako 'ukufundisa okunene." Kodwa ixesha elininzi hip hop na ofana yokucheba ngaphezu kwiklasi yesikole sangecawa. Rappers ngokungenankathalo wayebaleke ngomlomo, nokuba bayazi into uthetha ngazo okanye. ukunyaniseka vs. Angakhathali ...
Ekuqaleni kulo nyaka ndaya kuhambo kunye encwadini yam entsha, Ubomi Good. busuku ngabunye, Ndanika intetho ezame ukuba uphendule umbuzo, "Kuthetha ukuthini ukuba baphile ubomi elungileyo?" eChattanooga, TN, thina wabhala umyalezo kwaye endizithumele ngaphezulu. Le ncwadi ezikhutshwe October 1, 2012 kwaye unako ukuthenga apha. Ukuze ufunde okungakumbi ncwadi unga nqakraza apha. Unakho ukuthenga The Good album Life apha. Ingaba ungumhlali ubomi elungileyo?
Uninzi uyazi ngam njengoko rapper kunye inkqenkqeza, kodwa inyaniso, entliziyweni Ndiye bekusoloko ngumshumayeli. Kuba gama bendikhe ukwenza umculo, umnqweno wam nekonsathi ibe ukuvakalisa iVangeli baxele ukulunga nozuko kaYesu Krestu. Ngobabalo lukaThixo Ndiye ndafumana ithuba ukusebenzisa umculo ukwenza ukuba kwiqonga kawonke. Ndiye bathanda ngamnye wesibini kwaye ndiye ndazama ukuyenza loo nto ngabugcisa. Emveni kweminyaka, Ndikhe ndeva uThixo endibiza nokusixhobisela kum nje ukuba umculo, kodwa ukushumayela baze babhale. Yiloo nto kunyaka ophelileyo ndikubhalela Ubomi Good, incwadi lide nzulu umyalezo emva irekhodi wam isibizo esifanayo. Yinto yoko ndabhengeza sokuwa wokugqibela bendingayi kuba kuhamba kangangoko ndiye. Ndifuna ukufunda indlela ngumfundisikazi othembekileyo, kwaye kuphela ngokwenene kwenzeka kwimeko kwicawa yasekuhlaleni. Ngoko ke wathatha ixesha ukutyala zokufunda abefundisi uThixo ecaweni yam Washington, DC. iNkosi ithandile, ngokuba ndiya kusebenza kubasebenzi ecaweni yam, Ndiza kuba nako ...
Nantsi le evakalayo kwi intshumayelo kutshanje ndazishumayela kwiNdumiso 142. Sonke siye ngamaxesha anzima, kodwa ndumiso ibonisa ukuba nkqu amaxesha imbi ngayo yonke into ekufuneka kuThixo sifumana. Ezi ngongoma zine: mna. UThixo Mhlobo Ngamaxesha Obunzima II. UThixo Protection wethu Ngamaxesha Obunzima III. UThixo Ubuncwane wethu Ngamaxesha Obunzima IV. UThixo uMhlanguli wethu Ngamaxesha Obunzima
Nantsi intshumayelo ndanishumayezayo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kuMateyu 12:36. Ndithandaza ukuba lukhuthazo kuwe.
Njengendlela yokubhiyozela ukukhululwa encwadini yam, Ubomi Good, nantsi le vidiyo esemthethweni "Omnye abalishumi," ukusuka icwecwe lam ezintsha, Kwakhona kuthiwa Life Good.
Thatha ujongo singaziboni kunye Trip Lee njengoko axoxe nixoxe ngobuhle kwinkqubo yokwenza icwecwe lakhe zakutshanje "Ubomi Good."
The New Umnqophiso
Nantsi intshumayelo kutshanje ndazishumayela kuYeremiya 31:33. iingongoma yam engundoqo: mna. UThixo Ukusebenza bamazwe II. UThixo Working Ngaphakathi III. UThixo Working Interpersonally IV. UThixo At Work
Yintoni Incwadi Yam Malunga?
Le ncwadi iphuma October 1, kodwa unako umxokozelo isahluko wesampula TheGoodLifeTheBook.com, kwaye phambi-odola ncwadi apha.
Ndandibukele inkoliso iindibano yezopolitiko kule veki ezimbini zokugqibela. Isithethi loluntu kum Zisuke kodwa phezu-ukuhlalutya imiyalezo nezakhono ngamaciko abaviwa kunye nabaxhasi babo. Wonke umntu Ngeloxesha wazama ukucenga kuni amabali kunye / okanye ezithembisa. Ndiza kuvuma, eminye iminqweno yabo zazintle, kodwa uninzi iintetho ndandiziva ubalwe, ezingenanto, ndikunyibilikise ezopolitiko- kum ubuncinane. Ezinye iingongoma bethetha zazingqalile kakubi kakhulu. Kodwa elona amaqonga ayikho ingongoma esi sithuba. Enye yezinto Ndaqonda ukuba ngelixa amaqela bebezama ukuthengisa abaviwa babo, ukuba uzama ukuthengisa zelizwe labo. Ngokutsho kwabo, propserity impahla kwilizwe ledinga, kunye neqela labo ufuna ukuba uMoses wakho. Ngenxa yabo, ubomi ezilungileyo kukufumana esisityebi xa usebenza nzima, kwaye mvotelwa yabo enguMsindisi ngubani angakusa khona. Kaloku akukho nto sisono ngayo ubutyebi. Yaye kuvuzwa yiNkosi ngomsebenzi onzima yinto elungileyo, kodwa loo nto kuba apho ubuxoki zethu ithemba. Ubutyebi akufuneki njongo yethu ekupheleni, kufuneka ibe yindlela ukuya ekupheleni enkulu. Kwakhona awunako ukuba ...
Nantsi intshumayelo ndashumayela kutshanje kwiNdumiso 95:10-11. yam 3 wayekufundiswe zilula: mna. Isono afune Umsindo kaThixo II. Isono Path Alernate III. Isono kusenza ukusuka ukuphumla kaThixo ndithandaza oku siyakhuthaza kuwe
Isizathu Yabhalwa iNcwadi
Incwadi kukhupho on October 1, kodwa ungenza kwangaphambili-order ngoku apha.
Trip Lee kwi "Beautiful Life" kwiminqweno kuThixo Vimeo. Ingoma yokuqala Ndimbhalela icwecwe lam lwakutshanje, "Ubomi Good" yaba ingoma ebizwa "Beautiful Life." Bethanda uThixo wathi kum yokuba ingoma, intliziyo yam emva kwayo. Apha iphela ngeposi yabo blog. Kwaye nanga amazwi ukuze le ngoma, obonakalisa izinto. Rose: Hook: Beautiful Life Inside Living Ukuphefumla Ukuqhubeka Ngoko Makhe Ithemba Suk uThixo wayesazi ukuba yena wayesenza Xa Wabanika Beautiful Beautiful Vesi Life 1: udade Dear, Mna ndive ndawo nani, ndiyazi ukuba akukho nto kulula kwinkxalabo walityhutyha ukuba Kukho usana esizalweni lwakho, kodwa akazange ndizama ukwenza ukuba Kungcono uthathe lonke kwakhona ukuba ubusazi ukuba, kodwa nina abe nofifi ukuba loo ixesha Ingaliqabane lakho, busuku kwexesha Xa ubucinga bendisenza uthando, ukuba uza kwenza ubomi Ke ngoku loo nto uziva olungafanelekanga, umntu alifani Wena lo wafumana ubomi, dubula, ixesha nyani akulunganga Ayikwazi awuyifumani kukuxelela ukuba ndiyayiqonda intlungu yakho Ke mna ndiyazi ukuba uzive zeka neentloni Kwaye ndiyazi ukuba usana esiswini bakho umdlalo Umelwe ...
Le ndoda uThixo ngenxa ubuncwane bakhe zonke izinto One. ubuncwane abaninzi oqhelekileyo wokhanyelwa naye, okanye ukuba akuvumelekanga ukuba nazo, nokonwabela kwabo kuya ukuze wobulali ukuba baya kuze kuba yimfuneko ukuba ulonwabo lwakhe. Okanye ukuba kufuneka kubabona aye, omnye emva komnye, uya kungangenkankulu uziva ilahleko, ngokuba uMthombo yezinto zonke anayo One zonke ulwaneliseko, konke ukuthanda, konke endikunanzileyo. Nantoni unokuyeka okunene ethe yalahleka nto, kuba ngoku bonke oko One, yaye liye kuphela, ngokusemthethweni ngonaphakade. A.W. Tozer, Ukusukela kaThixo
Ubudoda yesibhalo ukubaluleka kwendima iimodeli Ukunqwenela kuThixo Vimeo. abahlobo bam ukunga uThixo wandibuza imibuzo malunga imiqobo ubudoda nendlela ukulungisa ingxaki. Nantsi into ndathi
indlela Roma 8 Inceda Trip Lee kwiminqweno kuThixo Vimeo. abahlobo bam ukunga uThixo wandicela ukuba ukwabelana ngayo isicatshulwa seSibhalo endincedayo uninzi. Kule vidiyo ndicinga ngamaRoma isahluko 8
Yintoni iVangeli? kwiminqweno kuThixo Vimeo. Enye iklip ukusuka ndlebe lwam bethanda uThixo. Bambuza ukuba ndikwazi baphindaphinda yeVangeli 2 imizuzu. Le yinzame yam
Hop Hip kwaye alwe nesono
Le yinxalenye ndlebe mna kunye bethanda uThixo. Ndiza ngeposi namanye amalungu njengoko DG aziphose up Hip Hop kunye alwe nesono ekunqweneleni uThixo Vimeo.
Ubomi Good iNcwadi
Njengoko uninzi lwenu lusazi, Bendikhe ukusebenza incwadi ukuya kunye icwecwe lam ezintsha, Ubomi Good. Kakuhle le ncwadi iza kukhupha kunye iMoody Publishers on October 1, 2012. Funda banzi ngalo kukhupho cinezela ngezantsi. Kwaye ndiye TheGoodLifeTheBook.com ukuba kwaziswa xa ikhupha. Hip Hop ARTIST UHAMBO LEE ukumkhulula bt BOOK UBOMI KAKUHLE KWI OKTOBHA 1, 2012 NGENXA iMoody ABAVAKALISI iprojekthi ezayo yakha ekukhululweni album yangoku redefines "Ubomi Good" umngeni ukuba akasahlali abantu ekukhanyeni ubuxoki kodwa aqalise uhambo entsha nobuqaqawuli ngokugqithiseleyo. ANGELES, Calif. (UCanzibe 17, 2012) -Billboard Itshathi-nedama hip hop igcisa Uhambo uLee zilungiselela ngenxa yakhe ukukhululwa incwadi bt, Ubomi Good (iMoody Publishers). Uqhubekeko ukuba icwecwe lakhe zakutshanje leyo ekhululwe ngoAprili 10, 2012 ngokusebenzisa Records Reach, Ubomi Good uya kubetha igcina kuzwelonke ngo-Oktobha 1, 2012. "Kangangeminyaka, Bendikhe ukwenza umculo umngeni iimbono zethu ehlabathini amanqaku kuKristu - kodwa bekusoloko kukho umda umculo, ngokuba kukho kuphela kangaka uyakwazi ukunxibelelana ingoma,"Utsho Uhambo. "Le album wanika abaphulaphuli ezikhawulezayo ubomi elungileyo, kwaye incwadi iya ...
Amava Ezilungileyo Life Live
Ukhenketho Life Good eqala kule veki! Khangela ukuba zeziphi umhla kuya kuba ekufutshane nawe. Siza kuba in eMinneapolis, Michigan, Virginia Beach, Nashville, Orlando, kwaye Dallas. imihla Okuninzi ziya kongezelelwa ngokukhawuleza kwakunye! Nqakraza indwawo amatikiti okanye ukuya ReachRecords.com/events.
Ezi amazwi ingoma yam iLove on icwecwe lam elitsha "Ubomi Good." Nabani na ongomnye ubunzima ukusuka iLove? ivesi 1: Igama Intombi yam uqala mna Shines eliqaqambileyo ezifana neenkwenkwezi ecaleni lam leengalo esibhakabhakeni, xa kumnyama alo ukuba ukukhanya Yena ukhetha ezininzi, kwaye ulahlekile emehlweni akhe yondele kuye endaweni ukubukela amanyathelo ethu Balekelani xa sihleli ngaphandle ubambisa impefumlo yethu Uyi-addicting, inyani: siza fiends Kodwa ngaba isezele thina iglu, siza nje qhiwu izikrini Yena Sime, ukubona ubungqina xa ikhala mhlawumbi Ndingathanda ukuthatha ababini bakhe phezu abantu ababini ngabantu oodade bayo? Ezinye ezinkulu ezinye izikolo ezincinane Thina usebenze yakhe em yonke imihla yakhe ukuze Sifumana xa uwe nokuba awunako sinako yakhe Cela kum ukuba ngenene ufuna lwakhe? Ndibe nje, "yohlobo lwe" Kodwa xa ndibona kuye kwi-mall kwafuneka enkundleni yakhe Ndizigcine yakhe nezincedisi, ya inkwenkwe intimbo ndifuna ebomini bam, Ndingathanda ukwenza nantoni na ngenxa yakhe Libala malunga inkwenkwe dime, yena Sinokukufanisa kwikota mna naye lonke ixesha,...
i buBomi Good apha!
solo wam wesine album, "Ubomi Good" ngokusesikweni ukhululwe! Thenga yelicwecwe evela iTunes apha. Unga kwakhona ukukhetha yelicwecwe phezulu iivenkile Lifeway, Christian Family, Mardel, Ithagethi & Wal-Mart (khetha iivenkile). ngokunjalo, uyakwazi bukela ividiyo entsha "Mna Good" Sakunazisa Lecrae apha. Ekusetyenziswana Ngelizwi lamangqina kule uyiphakamisayo ulwazi malunga intshutshiso ukukhuthaza amakholwa ukuba nime ningahexi. Dibanisa kum ukuthandaza ukuba iNkosi wayeza kusebenzisa le projekthi ukuze umngeni nokukhuthaza ezininzi!
Yintoni Good Ngoko Malunga ngoLwesihlanu Good?
Yinto eqhelekileyo ukuba ukukhumbula imini yokufa umntu xa. Nabani na ulahle umntu omthandayo uyazi ukuba akusayi ayilibale imini Bagqitha. Ntombikayise ekupheleni ubomi, kwaye oko ebugxwayibeni. Kanjalo, njengoko uluntu, thina Ndiyasikhumbula kuphela abo sibathandayo. Xa manani ebalulekileyo yoluntu bafe ngaphambi kwexesha, sikhumbula kwaye isijwili umhla ebethathwe kuthi ngokunjalo. uhlanga lwethu ukhumbula usuku Martin Luther King Jr. wadutyulwa, kwaye umhla John F Kennedy wabulawa. Kodwa loo mihla esithile akazange achaze ukuba njengoko kulungile. Leyo yayiyimihla emanyumnyezi, apho amadoda othandekayo wabulawa ababulali ngolunya. kanti, Kwiminyaka engamawaka amabini eyadlulayo uYesu waseNazarete wabulawayo ababulali bakhe eyingozi, kwaye khumbula ukuba mini njengoko "Good" uLwesihlanu. Yintoni entle kangaka malunga imini xa abaninzi sathetha umntu embalini yoluntu wabethwa ubundlobongela kunye abulawe ziintshaba zakhe? Into yokuba abantu abangendawo babeza uceba ukubulala uNyana kaThixo buhlungu kwaye loo nto ngokuqinisekileyo isono inkulu esakhe senziwa. Kodwa ukufa kwakhe Ngokungafaniyo nabanye nokufa phambi kwayo okanye emva kwayo . Sinako kubiza loo mini "Good" ngoLwesihlanu ngenxa yezizathu ezininzi. Yena ...
Ndiyavuya Good Ichaze
"Ndilungile" ke enye yeengoma yokugqibela ukuba kubhalwe ukuze icwecwe lam elitsha, Ubomi Good. Lecrae ndize okunene wabhala waza wabhala ingoma eyahlukileyo ngokupheleleyo, kwaye uyithanda kuqala. Kodwa ekugqibeleni sagqiba ukuba kulunge kanye; yaye sasifuna ukubeka into enkulu. Ngoko idlale ibetha ezimbalwa kuye ukuba lyrics ndingazimisanga zabhalelwa ke, kwaye bobabini ilithanda lo. Ukuba iziganeko, ndlongo, kwaye anomtsalane. Ndamxelela ukuba ndifuna ukuba babhale umhobe ukuba yaziswe ukhuseleko lwethu kuKrestu. Ndandifuna ukukhuthaza amaKristu ukuba ayeke abahlala uloyiko kwaye uqale abahlala kumaRoma 8. Sagqiba kwi "Mna Good" umxholo, sabuza iNkosi uncedo, kwaye saqalisa ekubhaleni ezimbombeni ongafaniyo Reach ka-Atlanta studio. Siye ebhalwe inkoliso vocals bethu ngobo busuku, xa kwenziwa konke ndakuthanda thina. Ngethemba le ngcaciso lwamazwi kuya kusinceda ukwetyise umxholo ... Vesi 1: Mna ndive kufika imbandezelo ukuze kum, ukufa ekhayeni lam ndlela / ukoyika uthi liGosa kutshabalala bro, kodwa ukuba akukho nto kuthi iNkosi yam / Wathi andiyi unetyala nangona ...
Ukubhalisela INDODA Conference apha ukufunda okungakumbi icwecwe lam “Ubomi Good" Apha
Wonke umntu ufuna ukuthandwa. Enoba yavuma okanye a, sonke esi mnqweno wemvelo ukuze bazive ngummi kwaye kakhulu nangabanye. Abaninzi kuthi sichithe ubomi bethu bonke ukufuna umntu uyasithanda, ethembe ukuba umntu othile- nabanina- anelise le ndilangazelela ngaphakathi. Kulungile ukuba wena uceba ukuphulukana wena romance namhlanje wena Siyathemba ukuba uya ekugqibeleni oko iku-, Ndifuna ukwazi ukuba uwufuna lisezantsi kakhulu. Uya kufumana uthando inkulu bonke kwesibane ukukhanya dinala ngobu. nokuba, kukho onamandla onke, zonke ezanelisayo, uthando olugqibeleleyo ezifumanekayo kuwe. Kukho uThixo okuthandayo ngaphezu kokuba zibina. Uthando lwakhe akaguquguquki kwaye musa ukuba woo kuye okanye benzele. Ngaba UThixo Love Kuthi? Ndiyazi amaxesha amaninzi kuthi bayazibuza ukuba uThixo uthanda ngokwenene kuthi. Kubonakala kude. Kwaye mhlawumbi singavuya kuyeka bethingaza ukuba wenza into ukwenza kucace ukuba. Kwethu inyaniso, Sele ekwenzile. IBhayibhile ithi, "UThixo ubonisa uthando lwakhe kuthi ngaloo sakubon 'ukuba sisengaboni, UKristu asifele." Kwaye kwakhona uthi,...
"irobhothi" yeyona ngoma lokuqala icwecwe lam ezayo "Ubomi Good" yokukhupha April 10. Amazwi ingoma kunye ezamahala umxokozelo ngezantsi andinguye irobhothi yakho, Andinguye clone Asinguwe woonopopi yam mna irobhothi wafumana inkosi entsha mna simlandele ndedwa ndifuna ubomi emnandi, kwada mna bemkile Ivesi 1: Hey mna ndazalelwa ngaphantsi kwabantu ndiyazi izandi crazy Ke mna ngenene azalwe irobhothi njenge usana Akukho ubomi kum, Nje wadlala indima yam Akukho ukuzeyisa, Nje oko Ndaxelelwa ndifumene umyalelo wam wokuqala, Mna usuku nje ubudala Kodwa akazange abe nethuba, kuba kwakubanda indlela intliziyo yam wathabatha umyalelo intliziyo yam, Ndandingakwazi kuyaphula lomngundo Lithengiswe phantsi ebukhobokeni mna ndandingakwazi ukulawula Mna singagodoliswa kanye iingubo zam irobhothi nabahlobo bam irobhothi, kwaye irobhothi wam nomthamo Ukuphila iindlela robot, ukwenza ukuba konke ndiyazi Ndide ndeva mna bakhululwe umphefumlo wam irobhothi, Mna ngathi ... Hakisha Kutheni usoloko ezama ukulawula kum? Wena na umqeshi wam leyo ...
"Ubomi Good" ilahla April 10. fumana “irobhothi" ivideo apha
Kuba kwisiqingatha sokuqala 2011, Andiwonanga iingoma, ayinazimpawu, akukho ibonisa, akukho nto. Ndafudukela Washington DC kwaye bathabatha 5 iinyanga ngenxa wenkxaso eyayichumile. Nangona mna ukuba balihambahambe ihlabathi yaye emi phambi ulwandle abantu bonke ubusuku, ngomnye namaxesha echumayo ebomini bam. Xa lwangaphakathi ophele ndaqalisa kwakhona abahambahambayo ngokucotha waqalisa ukusebenza umculo entsha. Around sokuwa ikhatyelwe izixhobo ngokupheleleyo ukusebenza icwecwe lam lwesine solo. Yaye emva kweenyanga yomsebenzi onzima, yelicwecwe kwenziwa intle kakhulu. Andikwazi nokuba ukuchaza ukuba nemincili mna ukuba ayiyeke. Mna ndisoloko ndifuna ukunika abantu into Mna akaninikanga phambi kwabo. Andifuni ukuba remake icwecwe Sele zenziwe. Ndifuna ukuba akunike album olutsha, umculo entsha, kunye neendlela ezintsha yokubhiyozela inyaniso inye indala. e 2006 kwi icwecwe lam lokuqala, Ukuba Bebesazi, Ndandifuna ukuxelela abantu unguThixo ozukileyo ndifuna ukuba bazi. e 2008, "20/20" baphuma ndandifuna ukukhuthaza abantu ukubona iNkosi bayibonayo. 2 kwiminyaka kamva, "Phakathi ...
Nantsi ubunkokheli MLK yakhe nenkalipho xa umboniso (singasathethi ezinye yokubhala intle endakha ukufunda). Uyala ukwanga imithetho okungekho uyala alinde ngomonde. Uthabatha amanyathelo egameni uhlanga lonke abantu. Njengoko umntu omnyama, Ndinombulelo kakhulu kuThixo ukuze axhase umsebenzi ngaye. Kwaye njengoko ngumKristu, Ndifuna ukulwa okusesikweni kanye njengokuba nzima njengoko Wenzayo, Gcina engqondweni ukuba nguYesu kuphela ukuzisa okusesikweni ngokugqibeleleyo. Kwaye Yena uya. Le indawana ileta odumileyo MLK ngayo. Kufuneka uyifunde yonke loo nto xa ufumana ithuba. "Siye besithembele ngaphezu 340 iminyaka amalungelo ethu siseko uThixo awunike. Iintlanga Asia and Afrika ihamba ngesantya jetlike ukuze ubani ukuzimela kwezopolitiko, kodwa nangoku banyebelezela kwindawo ihashe nenqwelo yakowethu isantya ukuze sifumane ikomityi yeti kwikhawuntara sasemini. Mhlawumbi Kulula abo ongazange imijukujelwa ahlabayo yocalulo bathi, "Khawume." Kodwa xa enizibonileyo ekrakra woqhushululu lynch oomama nootata benu ngelo ukuthanda barhaxwe oodade nabazalwana bakho chess; xa uthe wabona yintiyo bayizalisa amapolisa undiqalekisele,...
Namhlanje sibhiyozela ilifa senkokeli abalaseleyo intshukumo Rights Civil, Dr. Martin Luther King Jr. UYehova asebenzisa le ndoda umfutho uhlanga, kwaye ushukumise abantu ukuya ukulingana. Kusekho umsebenzi ekufuneka wenziwe, kodwa ngegalelo lakhe elikhulu. Akukho hero igqibelele, noGqirha. Ukumkani wayexakekile, kodwa Ndimthanda kuye ngeendlela ezininzi kwaye mna iphefumlelwe ilifa lakhe. Nazi izinto ezintathu ngobomi bakhe ezikhuthaza kum. 1. Amkhanuke Justice Dr. Ukumkani yokubandakanyeka kokusesikweni ukuba kuxhaphakile kwihlabathi lethu, kwaye wanikela ubomi bakhe ekulweni nayo. EBhayibhileni, wabona umbono kaThixo ihlabathi lakhe, Wabona abaprofeti ikhwelo ekupheleni kwingcinezelo, kwaye Yena ecenga ukubona ukuba ubulungisa kubakho. Ndiyabathanda le amkhanuke ubulungisa, ukhunge kuThixo kwakuza kuqhubeka ukuze bayixube entliziyweni yam. Ndifuna ukulwa abacinezelwa nokushumayela iindaba ezimnandi amathemba. 2. Ubunkokheli Nangona ubutsha bakhe, Dr. iintetho esiprofeto lokumkani akhazimlayo nombono ocacileyo amsa zivela yinkokeli intshukumo. Akazange bahlale umva kukukhalaza, yena eqinisa kwaye ...
Ubomi obunye: Yabelana ngayo
Isibini kwiiveki ezidlulileyo, Ndathetha kwikhampasi Outreach National Conference ngoxanduva zonke ikholwa ukuba ashumayele. umbhalo wam 2 Korinte 5:18-21. Nantsi nevidiyo kwiseshoni. Ubomi obunye | Yabelana ngayo - Trip Lee ukusuka Campus Outreach kwi Vimeo. Ukuba unomdla, nantsi nevidiyo kwingxoxo yephaneli ndibe yinxalenye kwakunye. Le ngxoxo malunga campus ubulungiseleli, kwicawa yasekuhlaleni, iKomishoni Great, njalo: Wabefundisi Panel ukusuka Campus Outreach kwi Vimeo. kunye, Ke kaloku ndimyaleza kuni khangela ezinye zonke eendaba ukusuka kwinkomfa. Bekukho iitoni yokufundisa kakhulu ukuba ndicinga ukuba uya kufumanisa ukuba lakheke.
3 Iindlela Deny uThixo
Ngaba ndimkhanyele uThixo Universe? Yikholwe okanye hayi, lo ngumbuzo obalulekileyo sonke ukuba ucinge. Icacile iSibhalo ngaloo ebomini obungunaphakade yabaqhutywa abo bathembele uThixo zikholwe Iindaba zakhe ezilungileyo, kwaye isigwebo nje enzekayo abo bakuphikayo kuye. Kodwa kukho ngaphezu kwesinye indlela ukukhanyela uThixo. Nazi ezintathu ndiyifumene kwiTestamente Entsha. 1. Okhanyelayo ukuba uYesu Ngubani Wathi yena Ngaba "Ngubani na ixoki, ingenguye okhanyelayo ukuba uYesu unguye uKristu? Ukuba umchasi, omkhanyelayo uYise noNyana. Akukho namnye abamkhanyelayo uNyana unaye noBawo. Othe wavuma uNyana unaye noBawo." 1 John 2:22-23 Kukho abantu abaninzi kwihlabathi lethu namhlanje ucinge njengabantu ngokomoya okanye unqulo. Bakholelwa ukuba uThixo ukho, kwaye uzame ukuba bamnqule ngendlela yabo. Mhlawumbi baya kubona uYesu ngumfundisi omkhulu okanye umprofeti ovela kuThixo. Kodwa ukuba anikholelwa ukuba uYesu ngubani yena wathi yena, bona abo bakuphikayo ukuba. Ukubona uYesu nje enkulu ...
ngokuba ngamaKristu, umbuzo ayikho nokuba siza kujongana nesilingo, kodwa njani Siya kusabela xa sisenza. kuLuka 4:1-2, sifunda malunga weyelinga uYesu yena wasabela njani. Nantsi le evakalayo kwi intshumayelo emfutshane ndashumayela ngaloo sicatshulwa ecaweni yam iinyanga ezimbalwa emva. Ndandifuna ukujonga ekuhendweni kaYesu, kubonisa ekuthobeleni yakhe, kwaye ucinge ukuba singafunda ntoni kule ndawo. Zeziphi izinto sifanele sikhumbule ngamaxesha isilingo? Nazi iingongoma eziphambili: mna. UThixo Ikuvumela kwaye Usebenzisa Izilingo njengenxenye yesicwangciso wakhe II. Ubuthathaka akekho njengesizathu uyekelela esilingweni III. UMhendi sele ezoyiswa isilingo kukaYesu BragOnMyLord ndithandaza ukuba lukhuthazo kuwe
Ngaba Indlela ilungisa emehlweni kaThixo?
Njani na singamalungisa emehlweni kaThixo? Oku ngokuqinisekileyo kwi intlonipho efanayo apho uKristu obengumoni. Kuba ecinga ngendlela indawo yethu, ukuze ube mthetho kwigumbi lethu, kwaye ukuze kujonganwe nazo njengoko ngokomoni, hayi ngenxa yeziphoso zakhe, kodwa abo zabanye, njengokuba yena enyulu kwaye baxolelwe zonke isiphoso, kwaye ukuze banyamezele isohlwayo ityala kuthi- ukuba yena. Ke ngendlela efanayo, inene, ukuba ngoku amalungisa sikuye- kungabi ngokumalunga saneliseke yethu endisenzela ubulungisa bukaThixo ngenxa yethu kwimisebenzi, kodwa ngenxa yokuba ndincinwe ngokunxulumene ngobulungisa bukaKristu, apho kuthe kwambatha ngokholo, ukuze ibe yeyethu. John Calvin Funda oku ngokucotha makube Nditshonile! Ndiye ndabona esi sicatshulwa xa nilungiselela umyalezo wam 2 Korinte 5:18-21 kuba Outreach Conference National Campus. Izinto ezintle
Yaye akukho nto ifihlakeleyo emehlweni akhe
Kanjalo akukho sidalwa singabonakaliyo emehlweni akhe, kodwa yonke into imi ze emehlweni ngaye lowo kufuneka anike ingxelo. Hebhere 4:13
Ndiya Take It, ngelo xesha, Loo engakholwayo uYesu
Ndi yi, ngelo xesha, ukuba engakholwayo uYesu (Abakholelwa kuYesu) na ekuphambukeni uYesu ukuze bafune ulwaneliseko kwezinye izinto. Nokukholwa uYesu esiza kuYesu ngenxa ngokwanelisa iimfuno zethu iminqweno yethu. Nkolelo ayisekelwanga ikakhulu isivumelwano ngobunyani entloko; ke isikakhulu ndibawele entliziyweni leyo wasiqinisa kuYesu ulwaneliseko. [uYesu uthi,] 'Lowo uzayo kum, akasayi kulamba; lowo ukholwayo kum, akasayi kunxanwa naphakade!'John Piper
Malunga nenyanga eyadlulayo ndandibhala blog exelela abantu ukuba ndatshata abatsha ukuze. Ndakhuthazwa gqitha iimpendulo ezisuka bonke abafunda kwaye umthandazo wam ebesoloko ukuba iNkosi iza kusinceda ukuba bacinge ngayo eBhayibhileni ngomtshato. Ukuba khange ndikwazi ukufunda ukuba isithuba original khangela phandle apha: Kutheni Ndakha Ukutshata Ngoko Young? Kakuhle emva kokuba abantu abaninzi kangaka Wasolula kum endixelela ukuba indlela luncedo kubo, Ndandicinga ukuba kuza kuba luncedo kanye njengokuba ukuba wam umfazi, Jessica, ukuphendula umbuzo efanayo ngokwembono yakhe. Ngoko ke naku. Yintoni eyenza umfazi wam isigqibo ukutshata abatsha ukuze? Uthi… 1. Ndafumana indoda enobuthixo Xa ndandiqala ndadibana Uhambo, Ndathi uceba ukutshata nanini msinyane. Kodwa ngexesha yokuqala saya ngaphandle, Ndandisazi ukuba kwakukho into eyahlukileyo ngaye. Yena benehlombe iVangeli ngendlela endingazange ngaphambili umfana ubudala yam. nam andizange ndadibana nomntu ngenxa yolwazi sobulumko kwi ukuthandana. Enkosi ngumfundi phambi kwikholeji wayesazi kakuhle into ecinga ...
Nazi ezinye nevidiyo intshumayelo ndanishumayezayo ekuqaleni konyaka San Diego. Umxholo wale nkomfa "Iqhutywa", ndaza ndakhetha ukushumayela ngamaRoma 12:1-2. Ntoni kubonakale ngathi ukuba ulikholwa abe "baqhutyelwe?" iingongoma yam engundoqo kukuba ikholwa kufuneka ... 1. Siqhutywe Mercy 2. Uwexulwe, uzinqule 3. Guqukani Ithemba luncedo kwayo!
Ndifuna nje ukubulela bonke abathandazela sakubon 'ukuba khenketha e kwilizwekazi enkulu Afrika. INkosi ngenceba Waphendula abaninzi loo mithandazo, kwaye iyasetyenziswa kunye nathi ukwenza ifuthe kumazwe amathandathu ezahlukeneyo. ngoku Ukhenketho lifikelele esiphelweni aze sihamba ekhaya ngokuhlwanje. Singavuya siqonde imithandazo yenu gqolo ukuhamba ekhuselekileyo kunye nempilo. Abambalwa kuthi azikhange uziva kakuhle kakhulu kwaye sifuna ukuyenza ikhaya elisempilweni. Ndikhangele phambili ngeposi blog xelela konke ngohambo lwethu. Kude kube ngoko sibaxabisa imithandazo yenu
Bezisinceda kunye Unashamed Africa
Kanye ngoku its 12:34 mna Botswana. Yinto mini yethu yokuqala ngokupheleleyo Afrika kunye neNkosi sele emsebenzini. Mbelele yalila yonke efika ngobusuku yokugqibela Rhawutini kwaye sibhabhe Botswana ngale ntsasa. Simelwe ukuhlangabezana iitoni ngabaxhasi le kwemini ngexesha ukutyikitywa senza kwi- venkile zamaKristu kwaye wayenazo udliwano kakhulu. ngokuhlwa ngomso lo ikonsathi wokuqala kukhenketho kwaye amped. Ngokwenene sifuna olu tyelelo ukuba baqhame kwaye singathanda uncedo lwakho. Unokumnceda njani? Kufuneka akuncede kwakhona kuthi ngomthandazo, ukuze abaninzi aya kubulela egameni lethu ukuze intsikelelo lula kuthi imithandazo ezininzi. 2 Korinte 1:11 Sikholelwa ukuba uYehova usebenzisa imithandazo yabantu bakhe ukuba benze izicwangciso zakhe. Ngoko ke enokusinceda ngokuthandaza. Nazi ezinye iindlela ezisisiseko uyakwazi basithandazele kunye nathi: 1. Ukuba iNkosi sihlale sisempilweni kwaye womelele 2. Siwuyeke yokuma thina sizivakalisa ukuba singabakhonzi 3. Ukuba Ikonsathi iza kuhamba kakuhle 4. Ukuba iNkosi ukukhusela iintsapho zethu ngeli sikude 5. Bokuba uKrestu uza kuba ...
Man Up Umboniso
Le Septemba esiyikhuphe mfutshane ifilimu kunye album ebizwa “Man Up" umngeni abafana ukuba amadoda. Nantsi umculo ividiyo ngenxa “Man Up uMhobe." Unakho ukuthenga elifutshane film kunye album apha
Nantsi le evakalayo kwi kwiseshoni nokuzifundiswa ekuqaleni kwalo nyaka yokushumayela othembekileyo. Evangelist athembekileyo BragOnMyLord Kwabo elifutshane ngexesha, nantsi isishwankathelo iingongoma: 5 Iimpawu Evangelist Athembekileyo ... 1. Eyamkela kwaye qonda iVangeli 2. Bazithembe yaye Unashamed yeVangeli 3. Uthanda Ezilahlekileyo 4. Ixhomekeke kuThixo Iziphumo 5. Uthandazela Ezilahlekileyo kunye namathuba okwabelana Lindela ukuba luncedo
The Invasion Umboniso
Kuba abo kuni Andizange ubumbonile umboniso for ingoma yam "ekuhlaselweni (iqhawe)" Nantsi. vuyela! Ndiyathemba kukunceda ukuba ugcine amehlo akho kuye uKristu.
Kutheni Ndakha Ukutshata Ngoko Young?
Izingxi, isingxi kwexesha ubusuku evenkileni ukuze sithathe izinto ezimbalwa kunye ndibene incoko umdla kakhulu osethilini. Senza njengento nje yena ndaqwalasela izinto zam, uze yandipha ikhadi isaphulelo kodwa wamxelela umfazi wam wayesele enye. Yilonto xa ncoko yaba mnandi. Ndiyazi ukuba le ncoko zonke kakuhle kakhulu kuba ndiye ndifeze izihlandlo ezininzi phambi. Ayisafuni into enjengale ... Mntu: Intoni!? Utshate? mna: Ewe Ndakhe nditshatile emibini enesiqingatha iminyaka ezimangalisayo. umntu: Ingaba umngakanani? Ubonakala ngathi lusana. mna: Mna ezingamashumi amathathu. umntu: Ukuba abantu abaselula ukuze! Yoko le nto ihlabathi ubuya kwenza ntoni ukuba? mna: Kutheni ndibe? e 2009, Satshata eneminyaka kunzima zomthetho akafane nangokuhloniphekileyo kominyaka imashumi mabini anamnye ezelwe. Ebudeni bokuthandana yam, uthethathethwano, umtshato mfutshane, Bendikhe wacela ixesha nexesha kwakhona imibuzo efana, "Kutheni atshate abatsha ukuze? Yintoni Ningxamele?", kwaye yintandane zam zobuqu, "Kufuneka besithembele yaye ubomi bakho!" Abanye abantu ngokubuza le mibuzo bangabasemzini, kodwa amanye osapho. Ngaba ndiya ndiphambene ukutshata kwindawo 'entsha ezifana" ubudala?...
Wonke ngoku ndize ndiye umva uze umamele albums neengoma eyabangela ukuba ngokwenene ngobugcisa ngokomoya xa khendeva. Esinye kwezo albums yiprojekthi Solus UChristus by Shai linne. Ngomnye albums zam hop hip osithandayo- ixesha. Ukuveliswa iyodwa (nangona commerical), umxholo Iyamangalisa, kunye nobuchule Shai ngayo lyrical iboniswe ngokupheleleyo. Le yenye yezo albums eyenza Rappers azibuza, "Kutheni ndi sa kuREPHA kwakhona?" Andikwazi azicaphule yonke irekhodi esi sithuba, kodwa nantsi enye isingise awuthandayo album. Yinto ivesi shai ukusuka 'Khangela Mika 1,2": Wanikela ngobomi bakhe, bube yintlawulelo, Mna abaculi ndiza ukudanisa Xa becengceleza imihobe zam kaKristu, iMvana amalungisa izibane lantern yam Ngubani omnye kodwa iNkosi yeentlanga Ngaba bebabaza njengenxila leentlanga babhale ngaphandle omnye ilizwi self-kukuzukiswa? amazwi am abatyhafileyo- azanelanga ngokwenene ukuchaza iMbewu Nasono umiselwe ukwenza izenzo ngokungummangaliso kweminyaka elishumi, ukuba iintloko ubudala bamangaliswa iimbono zakhe yena wabathobela abazali bakhe, nangona Wadala imibhobho zabo umoya A mgaqweni oyinyaniso- ngubani azicinge uMkhonzi ...
Indlela The Debate Ubufanasini Ukuba Yiya
ngeposi elihle Trevin Wax. Sonke sinokufunda ntoni koku onobabalo, yeBhayibhile, indlela nemfesane http://bit.ly/oWNTno
Isibini kwiiveki ezidlulileyo mna edlale ufu- wonda kwelinye icala lehlabathi kunye nabanye abantu bam endizithandayo. Tedashii, Pro, KB, Thi'sl, DJ PDogg, yethu umphathi ukhenketho Steadman, mna zazijongene eOstreliya ukukhonza uYesu. Senze ntoni Sahlala iiveki ezimbini phantsi babedlula yaseBrisbane, Melbourne, Perth, kwaye Sydney. Kwimeko nganye kwezi zixeko babeyinxalenye eekonsathi ezinkulu ukusuka 5,000-10,000 abantu abatsha. Phambi eekonsathi, saya kwezinye izikolo wamema ukubarholela ibonisa. Yintoni savunyelwa ukuba nithi ezininzi kwizikolo lwalulinganiselwe (ngenxa yokuba izikolo zikarhulumente non-lamaKristu), kodwa benza konke okusemandleni ethu ukuze ukukhuthaza abafundi ibalathisele kuKristu. Ngelo eekonsathi, amahlanu kuthi betha iqonga njengoko benza, yalila unashamed. Siye lanyikima ezo amanqanaba kangangoko sinako ngexesha uzama ukuba icace kangangoko kunokwenzeka malunga iVangeli olusenza ukuba senze ntoni. Kunayo nantoni sasifuna abantu bazi uYesu! Sisoloko sizama ukwenza ukuba abantu bashiye gqitha, kungekhona ubuchule bethu, kodwa iNkosi yethu. Yintoni namava Simelwe ...
Ividiyo Lecrae, Eric Mason, kunye Uhambo
Nantsi ividiyo Lecrae, Eric Mason, kwaye nam sixubusha hip hop kunye yeVangeli
YeVangeli Coalition Umboniso
Yakutshanje yeVangeli Coalition ividiyo Eric Mason, Lecrae, kwaye nam ngokuxoxa abantu abamnyama “anavuma" zakwalizwi
Jonga ngesondo ngokuBonisa
Inyaniso Okubuhlungu kakhulu